အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဓာတ်ဆီတင်ကားကို ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်၊ ၁၅ ဦးသေဆုံး - Yangon Media Group
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဓာတ်ဆီတင်ကားကို ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်၊ ၁၅ ဦးသေဆုံး
ကဘူးလ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်း ပါဝန်ပြည်နယ်မြို့တော်ချာရီကာ ၌ ညအချိန်တွင် ဓာတ်ဆီတင်ကား တစ်စီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၁၅ဦး သေဆုံး၍ အနီးအနားရှိအခြား ၃ဝ ခန့်လည်း ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် ညနှောင်းပိုင်းတွင် မြို့တော် အလယ်ပိုင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဗုံးကို ဆီတင်ကား၌ ကပ်ထားကာ ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဗုံးပေါက် ကွဲမှုကြောင့် အနီးအနားရှိ ဘတ်စ် ကားကိုပါ မီးလောင်ခဲ့ကြောင်း တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆင်ဟွာသတင်း ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအပါအဝင် လူ ၁၅ ဦးမီး လောင်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ လူ ၃ဝ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း၊ ဒဏ်ရာပြင်း ထန်သူများပါရှိ၍ သေဆုံးသူဦးရေ တိုးလာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့ကမှ တာဝန်ခံပြောကြားခြင်း မရှိသေးဟုဆိုသည်။
သို့ရာတွင် တာလီဘန်တို့က ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ¤င်းတို့က ဒေသခံထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီများ ကို အစိုးရ၏ပစ္စည်းနှင့် လောင်စာ များကို သယ်ပို့ခြင်းမလုပ်ရန် သတိ ပေးထားခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားတပ်စခန်း ချရာဒေသများကိုလည်း ပစ္စည်းမပို့ ရန် သတိပေးထားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ယခုနှစ်ပထမကိုးလအတွင်း ပဋိပက္ခကိုအကြောင်းပြု၍ သေဆုံးသူ ၂၆၄ဝ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၅၃၇ဝ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း အာဖဂန်ဆိုင်ရာကု လသမဂ္ဂမစ်ရှင်၏ စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးတင်းမာနေစဉ် အမေရိကန်သမ္မတ အာရှနိုင်ငံများသို့ ခရီးထွက်မည်
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မိသားစုဝင်များ အနက် ဒေါ်တင်သူဇာ အပါအဝင် လေးဦးကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်နှစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်မြို့နယ်များတွင် H1N1 ရောဂါပိုးရှိသူများတွေ့ရှိ၊ ၂၉ မြို့နယ်တွင် လူဦးရေ ၅၂ ဦးသေဆုံးခဲ့
ချင်းတောင်ထွက် ကော်ဖီစေ့ ဈေးမြင့်တက်နေ၍ ကော်ဖီစိုက် တောင်သူများ တွက်ခြေကိုက်
မုံရွာမြို့ ရှိ ဗောဓိတထောင်နယ်မြေ၌် ဆင်စခန်းတစ်ခုကို မတ်လအတွင်းဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ
အိမ်သုံး ဘိလပ်မြေအုတ် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အဆောက်အအုံ အတွက် ကုန်ကျမှုစရိတ် သက်သာသဖြင့် ဘိလပ??